အကောင့်များစွာရှိတဲ့ ဖောက်သည်တွေအတွက် သူတို့ ရဲ့ အကောင့်အားလုံးကို platformတစ်ခုတည်းမှာ ချိတ်ဆက်ပြီး အဆင်ပြေပြေရောင်းဝယ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ အရင်တုန်းကဆိုရင် လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး MetaTrader4MultiTerminalကိုဒေါင်းလုဒ်ရယူပြီး သင့်ရဲ့ tradingအကောင့်တွေအားလုံးကိုPlatform ၁ခုတည်းမှာချိတ်ဆက်လိုက်ပါ
သင့်မှာ tradingအကောင့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်, သင့်အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်! အကောင့်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပြောင်းဖို့ အရေး login၀င်လိုက် logoutထွက်လိုက်လုပ်စရာမလိုတော့ပါ. သင်အခုလုပ်ရမှာကတော့MT4MultiTerminalကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပြီး သင့်ရဲ့ အကောင့်အားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်း ချိတ်ဆက်ထားလိုက်ဖို့ ပါပဲ. ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို အကောင့်အများအပြားရှိတဲ့ traderများသာမက clientအများအပြားရှိတဲ့မန်နေဂျာများအတွက်ပါ အထူးသင့်တော်မှုရှိပါတယ်. အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာနှင့် ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့ တဲ့ အတွေ့ အကြုံသစ်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ.
MT4MultiTerminal နှင့်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာအရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် အချိန်ဆွဲ တုံ့ ဆိုင်းမနေပါနှင့်: